Okujabulisa umqeqeshi wePirates ngoweCaf - Ilanga News
Home Ezemidlalo Okujabulisa umqeqeshi wePirates ngoweCaf
Okujabulisa umqeqeshi wePirates ngoweCaf
UZinnbauer usazoqhubeka nokuswaya abadlali
UMQEQESHI we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer uthi uzoqhubeka nokubasonta abadlali bakhe, okubalwa kubo uSiphesihle Ndlovu, njengoba ekhala ngokulinyalelwa ngabadlali. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
UMQEQESHI we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer ugcizelele eyokuthi abadlali bakhe kuzofanele bakwamukele ukuthi uzobadlalisa noma yikuphi lapho ethanda khona ngenxa yokuphoqwa yisimo.
Lokhu ukusho ngaphambi komdlalo obucayi weBucs neJwaneng Galaxy yaseBotswana weCaf Confederations Cup ozokuba ngeSonto ngo-16h00 kulo leliya lizwe.
UZinnbauer uthi ngendlela abadlali bakhe abalimala ngayo, kuzogcina kuphoqa ukuthi abasonte ezindaweni abazidlalayo.
“Ngiyazi ukuthi abantu bazozibuza ukuthi kungani ngihlale ngenza izinguquko esikimini sethu, yisimo esiphoqayo, silinyalelwa ngabadlali ngenxa yokuthi imidlalo icinene. Ngeledlule bekunguPule, ngaleliya kwakunguBongani Sam, kubagadli kuyabhujwake, kababonwa.
“Abadlali kuzofanele bakuqonde ukuthi ngizobasonta ngoba isimo siyangiphoqa. Emdlalweni neCape Town City siqalise uDeon Hotto njengomgadli noSiphesihle Ndlovu ophondweni lwesokudla phambili ngoba silinyalelwe.
“Sinzima isimo kodwa kufanele abadlali bazi ukuthi ngizobasebenzisa noma yikuphi lapho engithanda khona,” kusho uZinnbauer.
Ephawula ngomdlalo neJwaneng, uthe ukholwa wukuthi uzofika sebewulungiselele ngokwanele.
“Okungijabulisayo ngalo mdlalo wukuthi ungeSonto. Ngakho sizokuba nesikhathi esanele sokuphumuza abadlali nokuwulungiselela ngoba kunezinsukwana ngaphambi kokuba siwudlale.
“Ngikholwa wukuthi uzofika sisesimweni esihle kakhulu,” kusho uZinnbauer.
IBucs iya kulo mdlalo nje, ngoLwesibili iguqise iCape Town City ngo-2-0 koweDStv Premiership e-Orlando Stadium, eSoweto. Amagoli enqobe ngawo abhajiswe enethini nguHotto noVincent Pule.
Previous articleIngebhe kuhlabeka iSilo sikaZulu
Next articleUdume lwengozi kubagijimi beComrades